Puntland Ayaa Si Adag Uga Jawaabtay Codsigii Cumar Filish » Axadle Wararka Maanta
Puntland ayaa si adag uga jawaabtay codsigii Cumar Filish
Garoowe (Axadle) – Dowlad goboleedka Puntland ayaa jawaab adag ka bixisay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) oo sheegay in Puntland iyo Jubaland ay “kala direen xukuumada”.
Jaamac Dabrani, agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Puntland ahna afhayeenka madaxweynaha Saciid C / laahi Deni, ayaa been abuur ku tilmaamay qoraalka Cumar Filish.
“Aad baan uga xumahay waana nasiib daro inaan maqlo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Filish oo leh Puntland iyo Jubaland waxay dhaheen dowlada hala kala diro! Xogtaan mas’uul ma ahan waana been cad!” “Soomaaliya (DFS) waa in lagu soo daro oo kaliya ajandaha, waana isla madaxweynihii hore ee Farmaajo “, ayuu qoray Jaamac Dabaraani.
Hadalka ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa imanaya kadib markii gudoomiye Cumar Filish uu weeraray hogaamiyaasha Puntland iyo Jubaland, kadib markii ay dawladu ku dhawaaqday shirkii Afisyooni mid fashilmay oo ay sheegtay inay iyagu masuul ka yihiin burburka wadahadaladii doorashada.
Doorashada oo dhacaysa oo looga dhigayay looga fadhiyo dowladda federaalka inay sameyso diyaar bay u tahay inay istaagto, kuwa kale waxay u taagnaan doonaan inaan la qaban ilaa qodobka aan hirgeliyo, haddii Dantey uusan helin si kale ma sameyn doono, ”ayuu yiri Cumar Filish
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in mid ka mid ah xubnahan uusan ku gabbanaynin mudada madaxweynaha ee uu dhameeyay xileedkiisa Maxamed, sidoo kale wuxuu ka mid yahay xubnaha warbaahinta ee lala hadlo marka ay wax ka hor imaadaan dowlada waqtiga.